Shirweynaha 3-aad ee Arrimaha Biyaha Carbeed oo la soo gaba gabeeyay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Shirweynaha 3-aad ee Arrimaha Biyaha Carbeed oo la soo gaba gabeeyay
Shirweynaha 3-aad ee Arrimaha Biyaha Carbeed oo la soo gaba gabeeyay
Shirweynaha 3-aad ee Arrimaha Biyaha Carbeed ee heer Wasiir ayaa lagu soo gaba gabeeyay dalka Kuwait, iyadoo go’aanada soo baxay ay yihiin kuwo waxtar u leh Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana ka qeyb galay wafdi ka socday Dowladda Soomaaliya.
Wasiiradda Biyaha Carbeed ayaa isku afgartay in Dowladaha Carbeed iska kaashadaan Horumarinta Kheyraadka Biyaha iyo habsami u maamulka ilaha Biyaha wadamadaasi.
Wasiiradu waxa ay isla gorfeeyeen in Dowladaha Carbeed ee dhaqaalohoodu hooseeyo laga saacido mashaariicda horumarinta Biyaha iyadoo Hay’adda Carbeed ee Horumarinta Biyaha laga codsaday in ay daraasaad ku sameyso baahida dalalka u baahan in laga gacan siiyo Horumarinta Biyaha.
Kusimaha Wasiirka Tamarta iyo Khayraadka Biyaha Xukuumadda Soomaaliya ahna Wasiir Ku Xigeenka Mudane Cusmaan Libaax Ibraahim oo qudbad qaayo leh ka jeediyay shirweynaha ayaa ka warbixiyay xaaladda Biyaha dalka iyo dhinacyada u baahan in Soomaaliya laga gacan siiyo, taas oo si weyn loogu dhag raariciyay.
kulamadii gaar gaarka ahaa ee Wafdiga Soomaaliya ay la yeeshen wafuuda kala duwan ee Shirka ka soo qeyb gashay ayaa dhammaan ku soo dhammaaday is afgarad iyo ballan qaadyo la xiriira mashaariic lagu horumarinayo Kheyraadka Biyaha in laga hirgeliyo Soomaaliya.